Kooxaha Juventus & Tottenham Oo Kulan Cajiib Ahaa Barbaro Ku Kala Baxay, Gonzalo Higiaun Oo Laba Gool Dhaliyay Iyo Spurs Oo Shaqo Muhiim Ah Soo Qabsatay. – GOOL24.NET
Kooxaha Juventus & Tottenham Oo Kulan Cajiib Ahaa Barbaro Ku Kala Baxay, Gonzalo Higiaun Oo Laba Gool Dhaliyay Iyo Spurs Oo Shaqo Muhiim Ah Soo Qabsatay.
February 14, 2018 Mahamoud Batalaale
Juventus ayaa iska lumisay hogaanka ay 2-0 ku haysay 9 kii daqiiqo ee ugu horeeyay kulankan waxayna Tottenham muujisay in xili ciyaareedkan ayna ka cabsanayn koox kasta oo wayn oo Yurub ama aduunka ka dhisan. Kadib markii ay hore uu soo garaacday kooxaha Manchester United, Liverpool, Arsenal, Real Madarid ayay Tottenham muuisay sida ay u qaan gaadhay ee ay kooxaha waa wayn iskaga celin karto.
Tottenham ayaa ka soo kabatay laba gool oo looga naxsaday bilawgii ciyaarta waxayna xaalada ku soo xumaysay Juventus iyada oo barbaro 2-2 ah la soo gashay. Higuain oo labada gool ee Juventus dhaliyay ayaa sidoo kale ka lumiyay rekoodhe uu ciyaarta wax badan kaga badali karayay laakiin goolal ay dhaliyeen Haken iyo Eriksen ayaa Spurs boos fiican dhigay ka hor kulanka Wembley Stadium.
Kooxaha Juventus iyo Tottenham ayaa kulan cajiib ah iskaga hor yimid Turino iyada oo Spurs marti u ahayd Old Lady oo doonaysay in ay khibrad iyo awood u sheeagto kooxda ree England, waxayna Juventus kulankan ku bilaabtay dardar layableh iyada oo markiiba Tottenham ka yaabsatay.
DAQIIQADII 2 AAD Juventus ayaa si layaableh u heshay goolkeeda furitaanka iyada oo Gonzalo Higuain uu si cajiib ah kubbada oo socotay darbo u raaciyay isaga oo caawin ka helay Pjanic wuxuuna ahaa gool markiiba jaho wareerar ku riday kooxda martida ahayd ee Tottenham iyada oo ciyaartu noqotay 1-0 ay isla markiiba Juventus hogaanka ciyaarta ku qabtay.
DAQIIQADII 8 aad Juventus ayaa rekoodhe ku guulaystay kadib markii uu Davies qalad ku galay Bernardeschi oo xerada ganaaxa Tottenham ku jira waxayna ahayd xaalad waali ah in Tottenham ay qaladkan gashay iyada oo gool looga hormaray isla bilawgii ciyaarta.
DAQIIQADII 9 aad Gonzalo Higuain ayaa gool u sarifay rekoodhaha kooxdiisa lagu abaal mariyay wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2-0 ay Juventus si layaableh hogaanka ciyaarta ugu dheeraysatay iyada oo aan la gaadhin 10 kii daqiiqo ee ciyaarta ugu horeeyay.
Intaa kadib Tottenham ayaa indhaha kala qaaday waxayna ku baraarugtay iyada oo lagu leeyahay laba gool laakiin juventus ayaa markiiba bilawday in ay difaacasho buuxda gasho isla markaana ay hogaanka labada gool ah ilaashato halka Tottenham ay noqotay kooxda wax walba garoonka ka samaynaysay si ay ciyaarta guu soo laabto.
DAQIIQADII 28 AAD Alla maxay gool badbaadin ahayd? Macquul ma aha in Buffon uu yahay 40 sano jir balse uu Harry Kane oo hor joogay ka badbaadiyay darbo madax ahayd oo gool cadaan ah loo fishay kadib markii uu Eriksen kubbad dilaa ah soo qaaday. Buffon ayaa muujiyay sida uu wali u leeyahay awoodii looga bartay.
DAQIIQADII 30 AAD Juventus ayaa weerar deg deg ah oo layaableh ku soo qaaday goolka Tottenham, waxaana loo fishay goolka saddexaad ee Old Lady laakiin Higuain oo goolka hortiisa fursadan ku helay ayaa halkii uu darbayn lahaa kubbada soo qabtay, wuxuuna isku dayay in uu lugta bidix ku darbeeyo laakiin darbo shabaqa soo salaami lahayd ayaa wax yar birta u martay!.
DAQIIQADII 35 AAD Tottenham ayaa iska soo celisay mid ka mid ah goolashii Juvnetus kadib markii uu Harry Kane si fiican uga dhex baxay difaaca Juventus isla markaana uu Dele Alli kubbad dhaafsaday Bianconeri, wuxuuna Alli kubbada u sii bixiyay Kane kaas oo Buffon markan dhinac iskaga dhigay si uu shabaqa oo banaan uu kubbada ugu taabto, waxayna ciyaartu noqotay 2-1 ay Spurs gool iskaga soo celisay.
DAQIIQADII 45+1 Juventus ayaa markale ku guulaystay rekoodhe kadib markii uu Douglas Coasta oo ciyaarta maqane jooga ahaa si buuxda iskugu muujiyay ilbidhqsiyadii ugu danbeeyay waxaana kubbad uu xawaare waali ah kula soo galay xerada ganaaxa Spurs qalad ugu galay Aurier kaas oo sabab u noqday in Juvnetus rekoodhe labaad lagu abaal mariyay.
DAQIIQADII 45+2 Higuain ayaa isku soo taagay in uu dhamaystirto saddexley qaybtii hore ah laakiin darbo xoogan oo uu ku tuuray goolka Tottenham ayaa birta dhinaca sare kaga dhacday taas oo keentay in Higuain uu seegay saddexleydan iyo goolasha uu Old Lady hogaanka ugu sii dheerayn karayay.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ahayd mid cajiib ah waxaana lagu kala nastay 2-1 ay Juventus hogaanka ciyaarta ku haysay balse ayna Tottenham quusan maadaama oo ay dhinaca kubbad haynta aad ugaga saraysay Juventus.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta Tottenham ayuu hadafkeeda kowaad ahaa in ay ciyaarta ku soo laabto oo ay keensato goolka labaad laakiin Juventus oo garoonkeeda joogtay isla markaana weeraro halis badan ku qaadaysay goolka Spurs ayaa doonaysay goolka saddexaad.
Ciyaarta ayaa noqotay mid sii adkaatay isla markaana u muuqatay in sidii qaybtii hore ayna u furnayn laakiin labada kooxoodba waxay doonayeen in ay goolal dhaliyaan taas oo ciyaarta ka dhigaysay mid xiiso badan.
DAQIIQADII 71 AAD Christian Eriksen ayaa kubbad laaga xorta ah oo Tottenham loo dhigay meel ka baxsan xerada ganaaxa waxa uu ku garaacay goolhaye Buffon oo filayay in kubbad joog sare ah uu xidiga ree Denmark tuurayo laakiin kubbada uu lugaha ciyaartoyda ka hoos saaray ayaa si toos ah u gashay shabaqa Juve waxayna ciyaartu noqotay barbaro 2-2 ah.
Goolkan ayaa muhiimad wayn u lahaa kooxda ree England maadaama oo ay marti ku dhalisay laba gool laakiin waxa layaabka leh ayaa ahaa in Juventus looga fiicnaa wax walba oo ciyaarta ah marka laga reebo in natiijada ciyaarta ay barbaro ku ahaayeen.
Tottenham ayaa samaysay bartilmaameedka ugu badan ee goolka, iyada ayaa sidoo kale kubbadaha ugu badan isku dhiibtay halka ay bosishanka si waali ah ugu garaacday Juventus.
Laakiin labada kooxood oo dagaal ugu jiray in ay helaan goolka guusha ee saddexaad ayaa awoodi waayay in wax goolal kale ah ay kala dhaliyaan taas oo keentay in barbaro 2-2 ah lagu kala baxay taas oo Juventus culays wayn ku keeni doonta kulanka Wembley Stadium.